နောက်ဆုံးဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ရာသီ ၄ - လွှတ်ပေးသည့်နေ့နှင့်နောက်ဖြစ်ပျက်မည့်အရာများ - နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်
နောက်ဆုံးဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ရာသီ ၄ - လွှတ်ပေးသည့်နေ့နှင့်နောက်ဖြစ်ပျက်မည့်အရာများ
နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော် - Netflix ဖြင့် - Netflix Media Center မှရရှိသည်
ဒစ္စနေး Plus အား The Simpsons ၏အစောပိုင်းရာသီများကိုဒီဂျစ်တယ်ဖြစ်သော်လည်းအရာရာသည်ကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ Disney Plus မှာကြည့်ဖို့အတွက်ကောင်းသောရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲ ၅ ခု
နောက်ဆုံးဘုရားသခင့်ရာသီ4သည် Netflix သို့မည်သည့်အချိန်တွင်လာမည်နည်း။ ရာသီသစ်ကို ၂၀၂၀ တွင်ပြသရန်စီစဉ်ထားသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရာသီအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ယခုအချိန်အထိသိရှိနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော် ရာသီ ၄ သည် Netflix ၌တရားဝင်ဖြစ်သည်! ပရိသတ်များသည် hit Netflix ၏မူလစီးရီး၏ရာသီသစ်ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားသောကြောင့်ရာသီသစ်တွင်ဖြစ်ပျက်မည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ရာသီ ၄ နှင့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်ဖြန့်ချိသည့်နေ့ကိုမျှဝေခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော် ရာသီ3နိုဝင်ဘာ 19, 2018 ရက်တွင် Netflix တွင်ပြသခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယရာသီ၏တစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်တွင်လာသည်။ ပရိတ်သတ်အတော်များများက Netflix ပြပွဲများသည်ရာသီများအကြားတစ်နှစ်ကွာဟမှုများသောကြောင့်ယခုလသို့မဟုတ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ရာသီသစ်ကိုကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ရာသီသစ်နှင့်အတူအမှုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒီတော့ဘယ်တော့ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်နိုင်လဲ နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော် ရာသီ ၄?
Netflix ကထုတ်ပြန်မည့်ရက်ကိုကြေငြာခြင်းမရှိသေးပါ နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော် ရာသီ ၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုသတင်းအချက်အလက်များကိုလာမည့်လအနည်းငယ်အတွင်း၌ကြေညာလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပါ။
ထုတ်ဝေ၏ထိုအချိန်ကကျနော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ် နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော် ရာသီ4ကို Netflix တွင် 2019. နွေ ဦး ရာသီ၌ဖြန့်ချိမည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ Netflix တွင်ရာသီသစ်မထွက်မှီရိုက်ကူးမှုအပြီးတွင် ၆ လခန့်ကြာသည်။ ရာသီ (၃) တွင်မေလ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ရိုက်ကူးပြီးနောက်ခြောက်လအကြာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်ရာသီသစ်ကိုပြသခဲ့သည်။
အရ နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်ရဲ့ Instagram ကို ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာတွင်စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ရာရာသီ ၄ တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်ရိုက်ကူးခဲ့ရာ Instagram ကိုထုတ်လုပ်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်ခြောက်လအကြာတွင်ရာသီသစ်ကိုဖြန့်ချိမည် 2020ပြီလသို့မဟုတ်မေလ 2020
ဒါကကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ Stay သည် Netflix ၏မူလစီးရီးသစ်ရာသီအကြောင်းသတင်းများကိုပိုမိုသိရှိရန်အသင့်ရှိနေပါ။
နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော် ရာသီ ၃ သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်လမ်း၏သူရဲကောင်း Uhtred အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောမှတ်စုတစ်ခုဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဘုရင်အဲဖရက်သည်ပြီးခဲ့သည့်ရာသီအကုန်တွင်ကွယ်လွန်သွားပြီးသူ၏သားအက်ဒွပ်သည်လွှဲပြောင်းယူခဲ့သည်။ ထို့နောက်အက်ဒွပ်သည် Uhtred ကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီး Uhtred သည် Cnut နှင့် Haesten တို့ ဦး ဆောင်သောဒိန်းမတ်လူမျိုးများကိုအနိုင်ယူခဲ့သည်။ ဒါဟာနှစ် ဦး စလုံးအဓိကစစ်တိုက်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပုံရသည်။
ဒီတော့အားလုံး Uhtred များအတွက်ကောင်းစွာသည်နှင့်အင်္ဂလန်မှာရာသီ4သို့ ဦး တည်ငြိမ်းချမ်းရေးရှိသနည်း အဲဒါကိုမကြားပါဘူး
အရ Geek ၏ Den , Aethelflaed အပေါ်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြန်ချက်ချင်းစည်းစိမ်နိုင်ငံများရင်ဆိုင်နေရသောနိုင်ငံရေးပstrိပက္ခသို့သူ့ကိုဆောင်ခဲ့ပေမယ့်, ရာသီသစ်ကို, သူ့ ဦး လေး Aelfric ကနေသူ့အိမ်ပြန်ယူရန်ကြိုးစား Uhtred ရဲ့ခရီးကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။
Uhtred မအခြေချခင်မှာရန်သူတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။ သူသည် Aethelred နှင့်အခြားဒိန်းမတ်တို့၏ကြံစည်မှုများကိုရာသီသစ်တွင်အနိုင်ယူရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာအစရာသီ3နှင့်4အကြားသိသိသာသာအချိန်ခုန်ဖြစ်နိုင်သည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအပြည့်အဝရှိတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ရဲ့။ ဒါကဒီစီးရီးအပေါ်အခြေခံပြီးကြောင်း Bernard Cornwall ကအားဖြင့်စာအုပ်တွေထဲမှာဖြစ်ပျက်ယျ။ ငါအချိန်ခုန်ကြောင်းကြီးမားသောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေခန့်မှန်းတာပါ, ဒါပေမယ့်သိသိသာသာဖြစ်လိမ့်မည်။
Alexander Dreymon အပါအ ၀ င်အဓိကသရုပ်ဆောင်အများစုသည်ရာသီ (၄) တွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ကိုငါတို့သိသည်။ Stefan Martini နှင့် Jamie Blackley အပါအ ၀ င်သရုပ်ဆောင်သစ်များအနည်းငယ်သာရှိသေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့ရပြီ ရေဒီယို Times ။
အချိန်သိသိသာသာခုန်ကျော်သွားပါက၎င်းတို့၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သို့စာအုပ်များမှလူကြီးဘဝသို့ရွေ့လျားနေသောဇာတ်ကောင်ငယ်များလည်းရှိလိမ့်မည်။ သူတို့အားဇာတ်ကောင်များအတွက် Cast သတင်းအချက်အလက် Netflix ကအတည်ပြုသို့မဟုတ်ကြေငြာခြင်းမရှိသေးပါ။
The Last Kingdom ရာသီ ၄ နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ထပ်သတင်းများအတွက်ညှိထားပါ။
နောက်တစ်ခု:နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်နှင့် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးပွဲ ၅၀
ရာသီ3wynonna netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
netflix အပေါ် carbonaro အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်
ပိုကောင်း2Netflix 2017 ရှောလုသည်ရာသီမခေါ်
Netflix အပေါ် Big Bang သီအိုရီ
ငါ Hamilton ကဘယ်မှာကြည့်လို့လဲ